Vabereki, Batsirai Vana Venyu Kuti Vave Nekutenda Muna Mwari — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Vabereki, Batsirai Vana Venyu Kuti Vave Nekutenda Muna Mwari
‘Majaya nemhandara . . . Ngavarumbidze zita raJehovha.’​—PIS. 148:12, 13.
6 Jesu aidzidzisa zvinosvika pamwoyo nekuti aida Jehovha, Shoko raMwari uye vanhu. (Ruka 24:32; Joh. 7:46) Rudo rwakadaro ruchaita kuti vabereki vadzidzise zvinosvika pamwoyo yevana vavo. (Verenga Dheuteronomio 6:5-8; Ruka 6:45.) Saka vabereki, nyatsodzidzai Bhaibheri nemabhuku edu. Farirai zvinhu zvakasikwa uye nyaya dziri mumabhuku edu dzinotaura nezvazvo. (Mat. 6:26, 28) Izvozvo zvichawedzera ruzivo rwenyu uye kuonga kwamunoita Jehovha, uye muchakwanisa kunyatsodzidzisa vana venyu.​—Ruka 6:40.
10 Munogonawo kushandisa resipi kuti mubatsire mwana wenyu kuti ave nekutenda muna Mwari. Mungazviita sei? Pamunenge mapedza kubika keke kana kuti chingwa, tsanangurai kushanda kunoita resipi yacho. Munobva mapa mwana wenyu muchero, zvimwe apuro, mobvunza kuti: “Unoziva here kuti pakatanga kuva ‘neresipi’ kuti apuro iri rizovapo?” Ibvai macheka apuro racho nepakati, momupa mhodzi imwe chete. Munogona kukurukura kuti resipi yacho “yakanyorwa” mumhodzi asi pachishandiswa mutauro wakaoma kunzwisisa kupfuura mashoko ari mubhuku remaresipi. Mungabvunza kuti: “Kana resipi yekeke iine akainyora, ndiani akanyora resipi yakaoma kunzwisisa yeapuro?” Kana ari mwana ati kurei, munogona kumutsanangurira kuti resipi yeapuro uye yemuapuro wacho wose yaiva chikamu chemirayiridzo iri muDNA. Munogona kutarisa mese mimwe mienzaniso iri pamapeji 10 kusvika ku20 ebhurocha rinonzi The Origin of Life​—Five Questions Worth Asking.
11 Vabereki vakawanda vanofarira kukurukura nevana vavo nyaya dzemuMukai! dzine musoro unoti “Zvakangoitika Zvega Here?” Kana kuti vanoshandisa chikamu ichi kuti chivabatsire kudzidzisa vana vadiki zvinhu zviri nyore kunzwisisa. Semuenzaniso, mumwe murume nemudzimai vekuDenmark vakafananidza ndege neshiri. Vakati, “Ndege dzinoita seshiri kana wakadzitarisa. Asi ndege dzinogona kukandira mazai dzotsotsonya tundege tudiki here? Shiri dzinoda kugadzirirwa nzvimbo yekumharira here? Unotii nezvekutinhira kwendege uchikuenzanisa nekuimba kweshiri? Saka ndiani akangwara kupfuura mumwe pakati pemugadziri wendege neMusiki weshiri?” Kutaura saizvozvo pamwe chete nekubvunza mibvunzo yakanaka kunogona kubatsira mwana kuti ave ‘nemano okufunga’ uye kuti ave nekutenda muna Mwari.​—Zvir. 2:10-12.
12 Mienzaniso inoshanda inogonawo kusimbisa kutenda kwemwana wenyu kuti Bhaibheri rakarurama. Semuenzaniso, fungai nezvaJobho 26:7. (Verenga.) Mungaratidza sei kuti rugwaro urwu rwakafemerwa? Pane kuti mungotaura zvinhu sezvazviri, munogona kubatsira mwana wenyu kuti afungidzire zviri kutaurwa. Budisai pachena pfungwa yekuti Jobho akararama kare, kusati kwava nemichina inoona zvakaita muchadenga. Mwana wenyu anofanira kuratidza kuti vamwe vangaomerwa sei nekutenda kuti chinhu chakakura senyika chingagara pasina chinhu. Mwana wacho anogona kushandisa bhora kana dombo kuti aratidze kuti zvinhu zvine uremu zvinofanira kugara pane chimwe chinhu. Izvozvo zvinogona kuita kuti mwana wenyu aone kuti Jehovha akaita kuti zvinhu zvechokwadi zvinyorwe muBhaibheri kare kare vanhu vasati vakwanisa kuratidza kuti ndezvechokwadi.​—Neh. 9:6.
14 Kuita izvozvo kunogona kudzidzisa vana venyu zvidzidzo zviviri zvinokosha. Chekutanga, Jehovha ari kutidzidzisa kuti tingararama sei upenyu hunofadza iye zvino, tova nerugare nevamwe. Chechipiri, ari kuita kuti tigadzirire upenyu munyika itsva kuburikidza nekutidzidzisa iye zvino. (Isa. 54:13; Joh. 17:3) Munogona kuita kuti pfungwa dzacho dzinyatsojeka nekutsvaga muenzaniso wemumwe munhu mumabhuku edu. Munogona kuuwana munyaya dzinoti “Bhaibheri Rinochinja Upenyu,” dziri muNharireyomurindi. Kana muungano menyu muine munhu akachinja upenyu hwake kuti afadze Jehovha, munogona kumukoka kuti azokuudzai nhoroondo yeupenyu hwake. Mienzaniso yakadaro inoita kuti mazano ari muBhaibheri aoneke kushanda kwawo.​—VaH. 4:12.
18 Vabereki, musakanganwa kuti hamukwanisi kumanikidza vana venyu kuti vave nekutenda. Munogona kudyara nekudiridza, asi Mwari chete ndiye anoita kuti zvikure. (1 VaK. 3:6) Saka nyengetererai mudzimu wake, uye shandai nesimba pakudzidzisa vana venyu. Mukadaro, Jehovha achakomborera zvamunoita.​—VaEf. 6:4.